5 ka mid ah Kooxaha Burcad Badeedka ah oo lagu wareejiyey Maamulka Puntland
Boosaaso:-Wararka naga soo gaaraya magaalada Boosaaso ee xarunta gobalka Bari ayaa sheegaya in 5 ka mid ah kooxdii ugu horreysey ee bucad baddeed ah ee ku xirnaa dalka Seychelles maanta lagu wareejiyay maamulka Puntland kuwaas oo saaka laga soo dajiyey Garoonka Diyaaradaha ee Boosaaso.
Agaasimaha hay’adda Puntland u qaabilsan la dagaalanka burcad badeedda Cabdirsaaq Maxamed Dirir Ducaysane ayaa warbaahinta u sheegay in maanta la keenay magalada Boosaaso 5dhalinyaro ah kuwaas oo ku xirnaa dalka Seychelles wuxuuna xusay in heshiis uu dhexmaray dowlada Seychelles iyo Puntland lagu soo wareejiyey dhalinyaradaas.
Cabdirsaaq Maxamed Dirir Ducaysane Agaasimaha Hay’adda Puntland u qaabilsan la dagaalanka burcad badeedda ayaa sheegay in dhalinyarada ay iyaga doorbideen in lagu wareejiyo Puntland lagu xiro halka ay ku xirnaan lahaayeen dowlada Seychelles.
Waxaa sidoo kale ka hadlay garoonka Diyaaradaha ee Boosaaso Taliyaha ciidamada asluubta Puntland Gen. Cali Nuur Cumar wuxuuna sheegay in maxaabiista maanta la keenay Boosaaso ay hordhac u yihiin laba boqol oo dhalinyaro ah oo ku xiran xabsiyo ku yaalla dowlada Seychelles.
Ma aha markii ugu horeysay ay dowlada Seychelles ay ku wareejiso Maamulada ka jira Soomaaliya dhalinyaro lagu eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxaha burcad badeed ah waxayna horey dhalinyaro ugu wareejisay Maamulka S/land .